Swing Game Machine Factory - China Swing Game Machine Manufacturers, abahlinzeki
Coin eziqhutshwa lollipop Vending umdlalo umshini uswidi ma ...
Umshini Omusha Wokufika Wemali Osebenza I-Capsule Toy Vending
Umshini womdlalo wemali oqhutshwa uhlamvu lwemali wabadlali abangu-6
Ukuzijabulisa Euqipment Uhlamvu lwemali olulodwa umshini womdlalo womdlalo
Hot ukudayiswa uhlamvu lwemali eziqhutshwa pandora Arcade games umshini ...
Imali eqhutshwa imidlalo ye-32LCD box arcade games ...
Umshini we-Pink date Scissors
Uhlamvu lwemali olusha olusetshenzisiwe lwe-3D kiddie ride dinosaur sh ...
UTSHA lwemali entsha eqhutshwa indiza enhle ye-3D kiddie ride ...
Uhlamvu lwemali olusha olusetshenzisiwe lwengane ye-3D yokugibela-iloli lomlilo ...
Uhlamvu lwemali olusha olusebenzayo lusebenze ingane engu-3D igibele amaphoyisa-imoto ...
Izinhlamvu zemali eziqhutshwa nge-3d Motor Kiddie Ride Video Games Swing ...
Izinhlamvu zemali eziqhutshwa i-Horse Kiddie Ride Video Games Swing ...
Umshini Osebenza Umdlalo Wezinhlamvu zemali 3d Umshini Wokuguqula Umdlalo Wevidiyo
Uhlamvu lwemali olusha olusebenzayo lusebenzise ingane engu-3D ukugibela imoto yamaphoyisa ngomshini wokugibela izimoto
1. Idizayini ekhethekile yemikhiqizo, enhle futhi ephanayo, ukuma okuhle, ukukhanyisa okumibalabala, okukhangayo kakhulu!
2. Inhlanganisela ephelele yomshini wokugibela ingane nomdlalo wokujaha， izingane zijabulela ubumnandi bokuswayipha ngenkathi zibona ukukhuthazeka nenjabulo yemidlalo yokusebenzisana! Ukuthakazelisa okuningi, imali ephezulu kakhulu!
Coin Isetshenziswa Game Machine 3D / MP5 Kiddie ukugibela umshini
1. Ukubukeka okuhle, umculo omuhle, intandokazi yezingane.
2. Izingane ngenkathi ushayela, kuyilapho ejabulela umdlalo fun interactive! Ukuthakazelisa okuningi, imali ephezulu kakhulu!
3. Kunezinhlobo eziningi zemidlalo, futhi ukhetha ukuthi iyiphi othanda ukuyidlala.
Izinhlamvu zemali eziqhutshwa umshini womdlalo wevidiyo we-Coin
Uhlamvu lwemali olusha olusebenzayo oluqhutshwa indiza enhle yengane engu-3D ngomshini womdlalo wendiza wokudubula
2. Inhlanganisela ephelele yomntwana wokugibela umshini kanye nemidlalo yokudubula ibhola, izingane zijabulela ubumnandi bokuswayipha ngenkathi zibona ukukhuthazeka nenjabulo yemidlalo yokusebenzisana! Ukuthakazelisa okuningi, imali ephezulu kakhulu!
3. Isihlalo esikhulu esiphindwe kabili, esenziwe nge-fiberglass, sihlala isikhathi eside!
Uhlamvu lwemali olusha olusebenzayo lusebenze umshayeli wegeyimu wokudubula ibhola lomdlalo we-3D kiddie
Uhlamvu lwemali olusetshenzisiwe lwe-3d Motor Kiddie Ride Video Games Swing Machine
Uhlamvu lwemali olusetshenzisiwe lwe-Horse Kiddie Ride Video Games Swing Machine
Uhlamvu lwemali olusha olusebenzayo lusebenze iloli le-3D kiddie -fire ngomshini womdlalo wokudubula
2. Inhlanganisela ephelele yomshini wokugibela ingane kanye nemidlalo yendiza yokudubula，izingane zijabulela ubumnandi bokuswayipha ngenkathi zibona ukukhuthazeka nenjabulo yemidlalo yokusebenzisana! Ukuthakazelisa okuningi, imali ephezulu kakhulu!